Milaza aminao ny "Dapoxetine": Ahoana no fomba hitondrana ny fananahana alohan'ny fotoana?
Febroary 10, 2019
1. Ejaculation vao haingana
2. Inona no atao hoe Dapoxetine?
3. Ny fahombiazan'ny dapoxetine ho an'ny PE
4. Ahoana ny fakana dapoxetine?
5. Inona no tokony hataonao alohan'ny handraisana ny dapoxetine?
6. Dapoxetine Dosage
7. Dapoxetine: Mety ve ny olona rehetra?
8. Dapoxetine miaraka amin'ny zava-mahadomelina hafa
9. Maka Dapoxetine izao ary miteny hoe "byebye" amin'ny PE !!!
10. Misy risika amin'ny fahasalamana ve aorian'ny fampiasana dapoxetine?
11. Dapoxetine FAQ
Phcoker dia mpanamboatra matihanina hamokatra vovoka dapoxetine
Ejaculation premier (PE) dia fahavoazan'ny firaisana ara-nofo mahakasika ny 30% ny lehilahy. Ny toe-javatra dia miavaka amin'ny fihenan'ny fihenanam-pitenenan'ny ejaculatory ao anatin'ny iray minitra ny iray minitra ny firaisana tsikombakomba. Io korontana ara-pananahana io, izay mety misy fiantraikany amin'ny lehilahy mavitrika, dia manana vokatra ara-tsaina mahavariana izay afaka manimba ny zon'olombelona.
Soa ihany, misy fitsaboana ara-pitsaboana izay afaka manampy amin'ny fitsaboana ny ejaculation aloha loatra, ary ny dapoxetine no iray amin'ireo mahomby indrindra eny an-tsena ankehitriny. Raha liana hahafantatra ianao ahoana no fomba fitsaboana ny PE, tokony mamaky ny dapoxetine fanadihadiana feno ianareo mba hahitanao ny valiny rehetra tadiavinao, ary mihoatra noho izany aza.
Inona no atao hoe Dapoxetine?
Dapoxetine HCL (129938-20-1) dia fanafody serotonin reuptake inhibitor (SSRI) voafantina izay noforonina manokana ary natao hitsaboana ny ejaculation aloha loatra. Ity zava-mahadomelina ity dia miasa amin'ny alàlan'ny fanovana ny haavon'ny serotonin transporter, fampiroboroboana ny fiasan'ny serotonin ao amin'ny hantsana post synaptic, ka mampiroborobo ny fahataran'ny ejaculatory vokatr'izany.
Ny Dapoxetine dia mivarotra tsena ho Priligy, ary dia ankatoavina ny fampiasana sy fivarotana any amin'ny firenena 50 manerana izao tontolo izao. Io famokarana io dia amidy amin'ny marika maromaro, toy ny Westoxetin, Primaxetin, Joytab, Ever Long, Sustinex, Longride Pentenal-30, Lejam, Kutub, Joybox, Duratia, ary Dumax.
Firenena maro no nankasitraka dapoxetine for sale ho an'ny olona nandritra ny taonan'ny 18 taona. Na izany aza, tsy ankatoavin'ny FDA (FDA) any Etazonia. Midika izany fa tsy afaka mahazo ny prescription dapoxetine any Etazonia ianao
Rehefa namboarina ny dapoxetine tamin'ny voalohany dia natao hampiasaina ho fanoherana ny famoizam-po izany fa toa ny vintana kosa dia hita ny vokatra tsy niniana natao - hita fa mahomby amin'ny fanemorana ny ejaculation ilay fanafody. Ankehitriny, ny dapoxetine dia be mpampiasa amin'ny safidy fitsaboana ho an'ny PE fa tsy toy ny antidepressant. Tsy toy ny SSRI hafa, ny dapoxetine dia entina haingana sy esorina amin'ny vatana, ka mahatonga azy io ho fitsaboana mety amin'ny ejaculation aloha. Torolàlana momba ny tombotsoan'ny Ipamorelin sy ny fampiasana Ipamorelin
Ny fahombiazan'ny dapoxetine ho an'ny PE
Ny fahafaham-baraka eo amin'ny lahy sy vavy dia singa manan-danja amin'ny fahasalamana sy ny fahasalamana eo amin'ny olona iray. Ny fotoana fikajiana ny fanavakavahana amin'ny fotoana fohy (IELT), izay fotoana lehibe indrindra eo amin'ny fanombohan'ny fidirana ao amin'ny vaginal sy ny fanombohan'ny ejaculation ao anaty, dia singa manan-danja amin'ny fahitana ny fahatanterahan'ny firaisana ara-nofo sy ny fahafaham-po.
Matetika ny dokotera no mandinika ny IELT rehefa mamaritra sy manasitrana ny ejaculation aloha. Ho an'ny lehilahy miaraka amin'ny karana IELT, dia afaka mandray soa be dia be avy amin'ny fitaovam-pihetseham-po amin'ny selotonina izy ireo. Izany dia satria ny SSRI dia manakana ny fizika ara-batana mifandray amin'ny ejaculatory tsy azo ihodivirana. Noho izany antony izany, dia azo ampiasaina ny SSRI mba handraisana ny ejaculation aloha.
Dapoxetine (CAS 129938-20-1) dia iray amin'ireo SSRI izay hita fa tena mandaitra amin'ny fitsaboana ny ejaculation aloha loatra. Ity zava-mahadomelina mahasoa ity dia manemotra ny fanentanana ny filahiana ary manemotra ny fivoahana ny ejaculation. Ny singa mavitrika amin'ny zava-mahadomelina dia entin'ny vatana haingana ary manomboka miasa eo anelanelan'ny iray na roa ora aorian'ny fandraisany azy.
Ny fanadihadiana dia nanambara fa ny fanafody PE dia mampitombo ny vanim-potoana manavatsava ny vaginal ejaculation. Ao amin'ny fianarana iray, ireo olona manana ny salan'isan'ny IELT amin'ny minitra 1 dia nahatsara ny ADN tamin'ny taon-dasa 3.1 isaky ny 30 mg sy ny 3.6 minitra taorian'ny famoahana ny dosage 60 mg. Midika izany fa tena mahomby tokoa ny dapoxetine amin'ny fampiroboroboana ny fanaovana firaisana ara-nofo.
Ahoana ny fomba haka Dapoxetine?
Dapoxetine hcl (dapoxetine hydrochloride) dia misy amin'ny takelaka 30 mg sy 60 mg, izay natao hiresahana am-bava. Tsy toy ny an'ny SSRI hafa izay tsy maintsy raisina isan'andro mba hiteraka ny vokatra irina, ny dapoxetine dia tokony horaisina amin'ny fotony "ilaina". Miasa haingana dia haingana ity zava-mahadomelina ity, noho izany dia tokony horaisinao izany rehefa mieritreritra ny hanao firaisana ianao fa tsy isan'andro. Tokony hotadidinao koa izao:
Makà tabilao dapoxetine iray ora 1-3 alohan'ny fakana sary,
Hangaroy ny takelaka manontolo tsy hitenenana satria misy tsiro mangidy. Ny fitsaboana ny fanafody dia mety hampidina ny fahombiazany.
Makà takelaka iray misy rano iray farafahakeliny.
Azonao atao ny mandray ilay tabilao na miaraka amin'ny sakafo na tsy misy sakafo. Azonao atao koa ny mandray izany na alohan'ny hanina. Na dia izany aza, ny mpanamboatra dia manoro hevitra ny hitondra dapoxetine miaraka amin'ny sakafo matsiro toy ny sakafo hariva satria mety hanemorana ny vokany ny zava-mahadomelina.
Inona no tokony hataonao alohan'ny handraisanao dapoxetine?
Alohan'ny hanombohana ny fitsaboana dapoxetine dia tokony hampahafantarinao amin'ny dokotera ny tantara momba ny fitsaboana mifantoka amin'ny fisehoan-javatra orthostatic taloha. Ny dokotera ihany koa dia tokony hanao fanandramana ortostatic (pulsed, tsindry, teboka ary ny fiaviana. Raha misy tantara momba ny fihetsika orthostatika na ny fitsaharana orthostatic dia maneho izany karazana fihetseham-po izany, tokony hialana amin'ny fitsaboana amin'ny dapoxetine. Nahoana i Sibutramine no malaza amin'ny fihenam-bidy?
Alohan'ny handraisana ny dapoxetine dia zava-dehibe ny mampahafantatra amin'ny dokotera raha:
Indraindray ianao dia reraka,
Manana olana amin'ny fo ianao
Manana fikorontanana na ra mandriaka ianao
Manana glaucome ianao
Manana olana amin'ny aty ianao
Manana olana amin'ny voa ianao
Tsy dia mahazatra loatra amin'ny fanangonana dapoxetine ianao
Manana olana ara-pahasalamana ara-tsaina ianao, toy ny mania, ny fahaketrahana, ny korontana bipolar, na ny toe-javatra hafa izay miteraka toe-tsaina ambany na avo,
Raha hitan'ny dokotera fa azo antoka ho anao ny mitondra dapoxetine, tokony ho azonao antoka ny hanaraka ny toro-hevitra nomena. Azonao antoka koa ny hamaky ny bokim-pitaovan'ny mpamorona ny fanontana printy ao anaty fonosana. Ny pamphlet dia manana fampahalalana manan-danja momba ny dapoxetine, anisan'izany ny torolàlana ampiasaina, ny fepetra takiana, ary koa ny mety ho fiantraikany hafa mety ho azonao aorian'ny fitsaboana azy.
Ny dingana natokana ho an'ny doka dia iray amin'ny tabilao 30 mg dapoxetine. Raha toa ka tsy ampy ny dosage 30 mg, dia mety hanapa-kevitra ny hampitombo ny dosinao amin'ny tablette 60 mg dapoxetine ny dokotera aoriana kely. Ny dokotera ihany koa dia afaka mandefa dose bebe kokoa raha toa ka manana vintana ianao mba tsy hiainanao ny voka-dratsiny rehefa maka ny dosage 30 mg.
Satria tsy misy fomba fitsaboana voafetra ho an'ity zava-mahadomelina ity, tsy misy ny fandaharam-potoana dapoxetine dose dia tena tsy azo inoana. Raha sendra tafahoatra ao anaty 24 ora, raha azo atao, raha toa ka misy tablette dapoxetine mihoatra ny iray dia azo atao tsara ny mijery dokotera avy hatrany. Ny soritr'aretina mihoatra ny mihoatra ny dia:
Mitombo ny tahan'ny fo
Fangalarana ny rantsana, sns
Mba hisorohana ny fiantraikany ratsy dia tokony:
Raiso dapoxetinetablets araka izay soso-kevitry ny dokoteranao,
Araho ny baikon'ny fampiasana rehetra voatanisa eo amin'ilay marika,
Aza mitondra ny zava-mahadomelina na kely na lehibe kokoa noho ny soso-kevitra,
Manaova fanaraha-maso tsy tapaka miaraka amin'ny dokotera raha maka takelaka dapoxetine ianao.
Vaovao tsara dia ny dapoxetine hcl (dapoxetine hydrochloride) dia tena mahomby amin'ny fikarakarana ejaculation vao haingana. Ny vaovao tsy dia tsara loatra dia ny, mitovy ny ankamaroan'ny fanafody, ny dapoxetine dia manana ny voka-dratsiny amin'ny vokatra hafa. Tao amin'ny fianarana iray dia nitatitra ny vokatry ny dapoxetine manaraka ireo lehilahy nandray ny dapoxetine:
maloiloy: Io no vokatry ny dapoxetine mahazatra indrindra. Ny fandinihana dia mampiseho fa ny 10 isan-jaton'ny lehilahy izay naka dosie 30 mg ary ny 23 isan-jaton'ny lehilahy izay nandray ny dosie 60 mg dia nitatitra fa nahonena.
Fanina / lightheadedness: Ity no faharoa mampiavaka ny dapoxetine, miaraka amin'ny tatitra 6 isan-jaton'ireo izay nandray ny dosage 30 mgs ary ny 11 isan-jaton'ireo izay naka dosie 60 mg.
aretin'andoha: Momba ny 5.6 isan-jaton'ny lehilahy izay naka ny dosage 30 mgs ary manodidina ny 9 isan-jaton'ireo izay naka fitaratry ny 60 mgs nitaraina noho ny nitezany ny lohany.
Aretim-pivalanana: Momba ny 3.5 isan-jato sy ny 7 isan-jaton'ireo lehilahy izay nandray 30 mg sy 60 mg of dapoxetine misy tra-doza niaina.
Somnolence: Ny momba ny 3.1 isan-jaton'ny lehilahy izay naka dosie 30 mg ary ny 4.7 isan-jaton'ireo izay nandray ny dosie 60 mg dia nitatitra fa niaina io fiantraikany io.
Ny voka-dratsin'ny dapoxetine mahazatra izay voalaza dia misy ny nasopharyngitis, tsy fahitan-tory ary ny havizanana, izay nisy fiantraikany teo amin'ny 2-3 isan-jaton'ireo izay naka fatra 30 mg sy teo anelanelan'ny 3-4 isan-jaton'ireo izay naka fatra 60 mg. Misy ihany koa ny voka-dratsin'ny dapoxetine kely, izay ao anatin'izany
Mitebiteby na miantsoantso amin'ny sofina
Fifanjevoana sy fahasosorana
Fihetseham-po haingana / tsy ara-dalàna
Ny tosidra ambony
Ho hitanao ny lisitra feno ny voka-dratsin'ny dapoxetine ao amin'ny bokikely fampahalalan'ny mpanamboatra ao anaty fonosana. Ireo voka-dratsy ateraky ny sahirana dia manatsara hatrany rehefa manitsy ny zava-mahadomelina ny vatana. Na dia maro aza ny voka-dratsy tadiavina dia tsy midika akory izany fa miaina izany ny rehetra. Raha sendra misy ny voka-dratsin'ny dapoxetine ianao dia zava-dehibe ny mangataka fanampiana avy hatrany amin'ny fitsaboana.
Raha toa ianao ka mahatsapa ho maivamaivana na malefaka, mandriaka na mipetraka eo anelanelan'ny lohalinao mandra-pahatongan'ny fahatsapana. Raha mahatsiaro ho marary na manindrona rehefa avy naka dapoxetine, mipetraha na mialà mandra-pialan'ny fihetseham-po mba tsy hianjera sy hanimba ny tenanao. Tsara ihany koa ny miresaka amin'ny dokotera na pharmacista anao mba hahafahana manasitrana fitsaboana azo atao mba hanamaivana ny soritr'aretina maharary.
Dapoxetine: Mety ve ny olona rehetra?
Toy ny fanafody maro hafa dia tsy natao ho an'ny rehetra ny dapoxetine. Ohatra, ny fanafody dia tsy tokony horaisin'ireo lehilahy izay tsy voamarina fa misy ny ejaculation aloha. Noho izany, tokony ho voaporofo araka ny tokony ho izy ianao ary omena fitsaboana sahaza ny ejaculation vao haingana mifanaraka amin'ireo fepetra voalaza etsy aloha, alohan'ny hotsaboina amin'ny dapoxetine.
Raha manana aretina mafy ianao, dia tsy ianao koa no kandidà tsara indrindra amin'ny fitsaboana dapoxetine. Ireo aretina izay tsy mahalasa anao ho mpirotsaka tsara ho an'ny fitsaboana dapoxetine dia ny olana ara-tsaina, ny toe-piainana, ary ny glaucome.
Raha efa antitra loatra ianao na tanora loatra, dia tsy kandidanao tsara koa. Izay tsy ampy taona 18 taona na mihoatra noho ny 64 taona dia tsy tokony handray dapoxetine.
Farany, tsy mpifaninana tsara ny vehivavy dapoxetine fitsaboana. Ity medikaly ity dia natao ho an'ny lehilahy eo anelanelan'ny 18 sy 64 taona.
Noho izany, iza no dapoxetine? Eny, dapoxetine dia ankatoavina amin'ny fikarakarana ny ejaculation vao haingana amin'ny lehilahy efa lehibe taona 18-64. Ny famintinana ny toetran'ity fanafody ity dia milaza fa ny dapoxetine dia tsy maintsy atao amin'ny lehilahy adolantsa ihany, izay mahafeno ireto fepetra manaraka ireto:
Ny fifehezana mamaivay momba ny ejaculation, miaraka amin'ny fotoana fetezan'ny ejaculatory ejaculatory (IELT) tsy mihoatra ny 2 minitra,
Ejaculation mihetsika na maharitra amin'ny fanentanana ara-nofo eo anatrehan'ny lahy sy vavy, alohan'ny, na, na tampoka aorian 'ny fifehezana sy alohan'ny fanirian'ny olona,
Ny fahasamihafan'ny fifandraisan'ny samy olona na ny fahorian-tsainy manokana vokatry ny ejaculation vao haingana,
Ny tantaran'ny ejaculation vao haingana indrindra amin'ny ankamaroan'ny fanaovana firaisana ara-nofo dia nanandrana nandritry ny enim-bolana teo aloha.
Dapoxetine miaraka amin'ny zava-mahadomelina hafa
· Dapoxetine + Tadalafil (Cialis)
Ny ejaculation aloha (PE) sy (ED) dia olana roa amin'ny fahasalaman'ny lahy sy ny vavy amin'ny lahy, fa ny ED kosa dia olana lehibe kokoa noho ny PE. Cialis dia mpanakana fisafidianana phosphodiesterase 5 (PDE-5), fanafody mahomby amin'ny fitsaboana tsy fetezana amin'ny alàlan'ny fiatraikany amin'ny firafitry ny hozatra malefaka. Tadalafil, izay singa mavitrika ao Cialis, dia tototry ny vatana haingana ary manampy amin'ny famerenana ny fananganana 20-60 minitra aorian'ny fakana azy ary manampy amin'ny fitazonana ny fananganana mandritra ny 24-36 ora.
Ny lehilahy sasany manana disfunction dia te-tsy hamerina ny fananganana azy ireo ihany, fa koa hanalefahana ny firaisana ara-nofo. Ny maka an'i Tadalafil / Cialis irery dia tsy afaka manampy ny lehilahy amin'ny zotra manao firaisana maharitra. Na izany aza, rehefa manambatra an'i Cialis amin'ny dapoxetine izy ireo dia afaka manao fihenjanana mafy ary koa manalavitra ny faharetan'ny fanaovana firaisana amin'ny sanda 50-70 isan-jato.
Raha mijaly amin'ny disfunction ianao sy ny ejaculation aloha loatra, dia ho faly ianao hahafantatra fa ny fiarovana ny dapoxetine miaraka amin'i Tadalafil dia azo antoka satria ny fifandraisan'ny zava-mahadomelina dia misy fifaneraserana mahazatra. Na izany aza, ny fampiasana maharitra ireo fanafody ireo dia mitaky ny fahavitan'ny fitsapana mialoha sy ny fanaraha-maso tsy tapaka ataon'ny andrologisto. Ny torohevitra fototra amin'ny fampiasana Dapoxetine + Tadalafil (Cialis) dia:
Raiso ireo fanafody roa isaky ny ora 1-2 alohan'ny hanaovana firaisana ara-nofo,
Makà tabilao tokana amin'ny 30 mg na 60 mg dapoxetine ary tablety iray amin'ny 20 mg levitra isanandro,
Vangio tanteraka ny latabatra, tsy manakiana na manapaka azy,
Aza misotro toaka amin'ny andro ampiasanao an'ireny zava-mahadomelina ireny.
Aza mandray dapoxetine raha tsy sasatra ianao. Ohatra, tokony hiala amin'ny fampiasana ny fanafody ianao aorian'ny fampiofanana ara-panatanjahantena.
Aza miditra amin'ny dapoxetine raha misy tazo, na tsapanao ny hatsiaka.
Mariho fa ny fampiasana dapoxetine sy Cialis ampiasaina amin'ny fihazonana ny fananganana maharitra sy ny fitomboan'ny libido dia voarara ao anatin'ny 6 volana aorian'ny fitsapana ny fifindran'ny myocardial na ny lozam-pifamoivoizana. Ny fanangonana ireo fanafody ireo dia tsy tokony hatao amin'ny marary manana toe-piainana goavana toy ny oncological lesions, ny tsy fahombiazan'ny foza, ny tsy fahampian-tsakafo sy ny hepatika ary ny aretin-tsaina.
Ny marary amin'ny fanandrenesana ny fisian'ireo fanafody ireo, ary koa ireo izay manana aretina ara-batana amin'ny taovam-pananahana dia tokony hisoroka ny fanaovana dapoxetine sy Cialis. Ny fampiasana an'ireny zava-mahadomelina ireny dia voarara ihany koa raha ny medikaly dia mitondra fanafody nitrate-nify sy Ipha-adrenoblockers.
· Dapoxetine + Sildenafil (Viagra)
Sildenafil, izay malaza indrindra Viagra, dia zava-mahadomelina izay anisan'ny antokom-pihetseham-po antsoina hoe karazam-panafody 5 an'ny phosphodiesterase. Ity fanafody malaza ity dia ampiasaina amin'ny fitsaboana ED. Rehefa avy naka izany dia manampy anao hahatratra sy hikojakojana fananganana matanjaka ampy hanaovana firaisana ara-nofo. Izany dia manao izany amin'ny famelana ny fampidiran-drà hivoatra ao amin'ny penisanao rehefa mampirisika anao hanao firaisana.
Ny Sildenafil dia avy amin'ny endrika telo - 25 mg, 50 mg ary 100 mg. Ny dosie sildenafil mahazatra mahazatra dia 50 mg, izay azo alaina amin'ny adiny efatra ka hatramin'ny adiny iray alohan'ny handehanana manao firaisana ara-nofo. Ny doka anefa dia mety hampihena amin'ny 25 mg na raha mitombo amin'ny 100 mg, mifototra amin'ny antony maromaro, anisan'izany ny fahombiazan'ny fanafody, ny fiantraikany amin'ny vatana, ny lanjan'ny vatana, ny toe-pahasalamana eo ambany, ary ny fampiasana fanafody hafa.
Ny Dapoxetine HCL sy ny sildenafil dia raisina ho toy ny fitsaboana mahomby indrindra amin'ny famotsoran-keloka sy ny ejaculation aloha loatra. Ny Viagra dia hanampy amin'ny fialan-tsasatra hozatra sy hanatsarana ny mivezivezy ao amin'ny penis. Ny Dapoxetine, etsy ankilany, dia hanaato ny fampiroboroboana ny penis anao ary noho izany mitaky ejaculation. Toro-hevitra fototra amin'ny fampiasana Dapoxetine + Sildenafil (Viagra) dia:
Raiso ny zava-mahadomelina roa isaky ny ora 1 alohan'ny hanaovana firaisana ara-nofo,
Makà tabilao tokana avy amin'ny dapoxetine sy tablety iray amin'ny Viagra isan'andro,
Aza misotro zava-pisotro misy alikaola rehefa mampiasa ireny fanafody ireny.
Tsy tokony handray dapoxetine sy Viagra ianao raha toa ka:
Tsy mahazatra anao ny zava-mahadomelina na ny zavatra entiny,
Nanoro hevitra anao ny dokoteranao mba tsy hanao firaisana ara-nofo,
Manana tantara momba ny fahitana momba ny fahasimbana amin'ny nerlandana ao amin'ny retina vokatry ny fihenan'ny ra,
Manana fikorontanana na ra mandriaka ianao,
Mampiasa fanafody nitrate amin'ny endriny rehetra ianao, izany hoe ranon-drongony, oral, hoditra hoditra, na sublingual.
Voatendry hanao fitsaboana na fandidiana ianao.
Tahaka ny mitambatra zava-mahadomelina hafa natao amin'ny fikarakarana ny faobe sy ny ejaculation aloha loatra, ny fangaro dapoxetine sy Viagra dia tsy soso-kevitra ho an'ireo izay manana endrika fanitsiana eo amin'ny penis. Ny lehilahy manana karazana fanodinana zarida, toy ny aretina Pyeronie, cavernosal fibrosis, na ny hatezerana dia tokony hanara-maso akaiky ny mpitsabo azy raha toa ka manao dapoxetine sy Viagra.
Tokony hanamafy ny fananganana farany mihoatra ny ora 4, ilaina koa ny mitady fanampiana ara-pitsaboana avy hatrany. Raha toa ka tsy miresaka mivantana avy hatrany io olana io, dia mety hiteraka olana lehibe, toy ny fahasimban'ny taova sy ny fahaverezan'ny fahaverezan'ny fananganana. Ankoatr'izay, ny vokatra hafa rehetra dia tokony halefa amin'ny dokotera tsy misy hatakandro.
Ankoatr'ireo fanafody nitratrate, dia misy ihany koa ny fanafody samihafa hafa mifandraika amin'ny dapoxetine HCL, ka tsy tokony hivondrona miaraka. Anisan'izy ireo ny:
· Monoamine oxidase inhibitors (MAOI)
Ny ankamaroany dia antokom-pihetseham-panafody izay fantatra amin'ny maha-mpanohitra tena matanjaka azy. Ampiasaina hanaparitaka aretina isan-karazany izy ireo, anisan'izany ny fahaketrahana, ny tontolo iainana ara-tsosialy, ny fikorontanan'ny saina, ny dysthymia, ny aretina Parkinson, ary ny aretina maro hafa.
Ireo mpanimba toandr'I Monoamine dia malaza noho ny fifandraisany amin'ny zava-mahadomelina. Ny serotonin-sela mpanangom-bokatra toy ny dapoxetine, dia ny sasany amin'ireo zavatra afaka mifandray amin'ny medikaly MAOI. Noho izany, tsara raha tsy mandray dapoxetine ianao raha mandray fanafody izay an'ny kilasy MAOI.
Mba hisorohana ny fiantraikany ratsy dia tokony handray dapoxetine 14 andro ianao aorian'ny fitsaboana amin'ny fanafody MAOI. Tokony hanao fitsaboana MAOI 7 andro aorian'ny tsy hanakànanao dapoxetine intsony.
Ny fitantanana ny Thiorizadine irery dia miteraka ny fitohizan'ny fifandraisana QTc, izay mifandray amin'ny arrhythmias matoatoa. Dapoxetine, izay manakana ny CYP2D6 isoenzyme dia manakana ny metabolisma amin'ny thioridazine. Ny tioridazine dia manantena ny hampitombo ny fihanaky ny QTC.
Noho izany, ny dapoxetine dia tsy tokony ampiasaina miaraka amin'ny thioridazine. Tokony hiandry ianao mandra-pahavitan'ny 14 andro aorian'ny fampiatoana ny fitsaboana amin'ny thioridazine. Toy izany koa, tsy tokony hampiasa ny thioridazine alohan'ny andro 7 ianao aorian'ny fialany amin'ny fampiasana dapoxetine.
· Medicines misy vokany serotonerôma
Tahaka ny amin'ny tsimok'aretina serotonine hafa indray mifototra, ny fampifangaroana dapoxetine miaraka amin'ny vokatra azo avy amin'ny fanafody sy herisetra izay misy ny serotonergic effects dia mety miteraka lozan'ny serotonine mifandray amin'ny vokany. Noho izany, rehefa mandray dapoxetine ianao, dia tsara kokoa ny miala amin'ny SSRI, ny SNRI, ary ny vokatra ara-pahasalamana toy ny linezolid, tramadol, lithium, tryptophan, triptans, ary ny tenin'i Md John.
Ny zava-mahadomelina hafa tokony hialana amin'ny fitondrana ny dapoxetine HCL dia:
Antikoagulants sy fanafody hafa izay mampihena ny fiterahana amin'ny ra. Rehefa ampiasaina amin'ny dapoxetine miaraka aminy dia mihamitombo ny fisian'ny ra.
Ny fanafody, ny metabolismy dia mitovy amin'ny dapoxetine, toy ny erythromycin, ketoconazole, fluoxetine, ary antibiôtika samihafa, antifungal ary antiviral agents.
Tamsulosin sy blocker adrenoreceptor a1 hafa izay ampiasaina amin'ny fitondrana aretina prostatic.
Raiso izao ny Dapoxetine ary miteny hoe "byebye" amin'ny PE !!!
Raha toa ny rahona mainty miposaka eo amin'ny lohanao, ny dapoxetine dia afaka manampy anao hanala azy amin'ny tsara. Ianao dia afaka buy dapoxetine an-tserasera amin'ny fivarotana an-tserasera manerantany. Aoka ho azo antoka ny famerenana ny mombamomba ny mpanjifa mialoha ny hividiananao ny antoka mba hahazoana antoka ny fahamendrehan'ny fivarotana an-tserasera izay efa saika hividy ny fanafody avy aminao.
Misy risika amin'ny fahasalamana aorian'ny fampiasana dapoxetine?
Toy ny amin'ny ankamaroan'ny fanafody, misy loza mety hitranga amin'ny dapoxetine ampiasaina. Soa ihany, ny vokatra mahazatra dapoxetine mahazatra dia tsy matotra, ary tsy ny olona rehetra no miaina izany.
Ny voka-dratsin'ny dapoxetine mahazatra kokoa, izay manimba ny 1 amin'ny lehilahy 10 farafaharatsiny) Inona no atao mba hanamaivanana ny soritr'aretina?
maloiloy Anontanio ny dokotera mba hisafidy fitsaboana mety
Fahavitrihana na fanindronana Mipetraha na miarena mandra-pandao ny fahatsapana mba tsy hianjera sy hanimba ny tenanao
Aretin'an-doha Anontanio ny dokotera mba hanoro hevitra amin'ny fanaintainana
Aretim-pivalanana Misotroa ranon-javatra maro ary angataho amin'ny dokotera mba hanomezana fanafody mety
Hafiriana no lasa farany i dapoxetine?
Dapoxetine HCL dia SSRI miasa fohy. Ny faharetan'ny fotoana hatramin'ny fatran'ny plasma faran'izay betsaka dia manodidina ny 1-2 ora aorian'ny fihinanana an'io fanafody io. Ny haavon'ny plasma dia tsy mihoatra ny 5% amin'ny haavon'ny tendrony hatramin'ny adiny efatra amby roa-polo aorian'ny fatra. Midika izany fa mijanona ao amin'ny vatana mandritra ny 24 ora ny dapoxetine, izay maharitra faharetana lava amin'ny fanafody izay natao hanemorana ny ejakulasi.
Afaka misotro toaka ve aho rehefa mitondra dapoxetine?
Tahaka ny fanafody amin'ny fialamboly hafa, misotro toaka voarara mafy ny dapoxetine. Izany dia satria ny alikaola dia mampitombo ny voka-dratsy ateraky ny fampiasana dapoxetine. Ny fananana fanehoan-kevitra miadana, mahatsapa torimaso na fanina dia vokatry ny voka-dratsiny izay mety hitombo rehefa ento miaraka amin'ny alikaola ny dapoxetine. Ny voka-dratsy dia mety hitranga koa, ka mitarika olana ara-pahasalamana lehibe mety hahafaty mihitsy aza.
Rahoviana no tokony haka dapoxetine aho?
Ianao dia tokony take dapoxetine "On demand" manodidina ny 1 ka hatramin'ny 3 ora alohan'ny fanaovana firaisana mialoha. Izany dia mahatonga azy io ho tsara kokoa kokoa raha oharina amin'ny fanafody hafa izay maharitra ela kokoa vao mahomby. Na dia azonao atao aza ny mihinana azy dia tsara kokoa ny tsy mihinana dapoxetine aorian'ny sakafo mavesatra, izany hoe aorian'ny sakafo hariva.
Aiza no azoko amidy Dapoxetine?
Raha te hividy dapoxetine ianao dia afaka manamboatra vidim-panavotana an-tserasera. Tsara ny manamarina ireo toerana samihafa mivarotra ity vokatra ity mba hampitahana ny vidiny. Alohan'ny hanaovana ny fividianana dapoxetine dia aoka ho azo antoka ny famerenana ny mpitsidika mpanjifa mba ahazoana antoka fa azo antoka ny tranokala an-tserasera azonao.
Ahoana no tokony hitahirizana dapoxetine?
Tokony hovidiana ao amin'ny toerana mangatsiatsiaka sy maina ny dapoxetine, ary lavitra ny hafanana sy hafanana mivantana. Zava-dehibe ihany koa ny mitazona ny dapoxetine amin'ny fahitana sy ny fahatratrarana ny ankizy.
Ahoana no ahafahako mahazo ny fitsaboana dapoxetine indrindra?
Raiso dapoxetine araka izay omen'ny dokotera na pharmacista. Midika izany fa tsy latsaky ny mihoatra na mihoatra.
Jereo ny daty fandaniana alohan'ny handraisanao ny fanelanelanana dapoxetine mba hahazoana antoka fa mahomby sy azo antoka izy io.
Araho ny baikon'ilay mpanamboatra ny farany, anisan'izany ny torolàlana ampiasaina sy fanafody mba hisorohana ny fampiasana dapoxetine.
Ny dopoxetine mangalatra dia tsy mihinana azy. Ataovy azo antoka ny maka dapoxetinewith ny vera feno rano.
Aza maka fanafody dapoxetine hafa, na dia mitovy aza ny toe-javatra misy anao.
Aza misotro toaka rehefa mampiasa dapoxetine satria mety hampitombo ny mety ho voka-dratsin'ny dapoxetine.
Aza mifangaro dapoxetine miaraka amin'ny zava-mahadomelina hafa.
Ataovy azo antoka ny mitandrina ny fanaraha-maso miaraka amin'ny dokotera mba hahafahanao mamaritra ny fivoaranao.
Inona avy ireo tombony azo amin'ny dapoxetine?
Izany dia miantoka fitsaboana mahomby amin'ny PE,
Tsy toy ny fitsaboana hafa ho an'ny ejaculation vao haingana izay manomboka herintaona roa herinandro, aorian'ny fandraisana azy, dia manomboka ny fihetsiny ny dapoxetine ora vitsy aorian'ny fangatahana voalohany,
Io fanafody io dia mampitombo ny faharetan'ny fanaovana firaisana ara-nofo amin'ny telo na mihoatra,
Ity fanafody ity dia azo ampiasaina miaraka amin'ny fanafody maro hafa izay mitondra hery.
Moa ve ny dapoxetine dia hisy fiantraikany amin'ny fahaizako mitondra fiara na manamboatra milina?
Ny Syncope, ny somnolence, ny fahitana manjavozavo, ny fanina ary ny fikorontanan-tsaina dia ny sasany amin'ny voka-dratsin'ny dapoxetine HCL. Noho izany, rehefa ianao mampiasa dapoxetine, dia omena torohevitra ianao mba hisorohana ny toe-javatra mety hitera-doza mety hitranga, anisan'izany ny milina fandraisana mpiasa na ny fiara.
Misy antony hafa mahatonga ny ejaculation aloha loatra, manomboka amin'ny antony ara-psikolojika ka hatramin'ny antony biolojika. Raha miady amin'ny ejaculation aloha ianao noho ny antony iray na hafa dia tsy tokony hijaly amin'ny fahanginana ianao. Miaraka amin'ny fisian'ny dapoxetine amidy Ao amin'ny Internet, afaka mahazo ny fahasalamanao ianao ary mahazo manao firaisana ara-nofo. Aza adino ny miresaka amin'ny dokotera mba hahazoana manapa-kevitra raha dapoxetine no fanafody tsara ho anao.